Rant: အွန်လိုင်းခိုးကူးမှုစျေးကွက် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 4, 2012 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 4, 2012 Douglas Karr
ဂီတလုပ်ငန်းနှင့်ခိုးကူးမှု၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့် torrent များ၊ သတင်းစာများနှင့်အွန်လိုင်းသတင်းများ။ ဤအရာအလုံးစုံတို့၏တူညီချက်ကဘာလဲ? ဝယ်လိုအားနှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်.
ငါအရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အဓိကအားပေးသူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းရဲ့လစ်ဘရယ်ဝါဒဘက်ကိုအနည်းငယ်မျှသာမှီခိုနေရသည်။ ငါလွတ်လပ်သောစျေးကွက်များနီးပါးအမြဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့မှယုံကြည်ကြသည်။ အစိုးရကခိုးကူးမှု၊ ဖိုင်ဝေမျှခြင်းနှင့်မှောင်ခိုရောင်း ၀ ယ်မှုများကိုအစိုးရမှနှိမ်နင်းသည်ကိုတွေ့မြင်တိုင်း ပြီးတော့အစိုးရကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုခံကာကွယ်တာကိုမြင်တော့ငါကပိုပြီးနည်းနည်းဆိုးလာတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာမဟုတ်ရင်မှောင်ခိုဈေးကွက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မယုံလို့ပါ သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုခုခံကာကွယ်.
အင်တာနက်ကစျေးကွက်ကိုဂီတနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ။ ငါကလေးဘဝတုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာသန်းနဲ့ချီတဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ဈေး၌ရာနှင့်ချီသောသူများအတွက်နေရာသာရှိသည်။ ငါ့အဘို့ကပဲဖြစ်ခဲ့သည် နမ်း။ ယခုစျေးကွက်ပွင့်လာသည်နှင့်အမျှ ၀ ယ်လိုအားမှာလည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည် ထောက်ပံ့ရေးနေရာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၀ ယ်လိုအားတိုးလာချိန်တွင်တေးဂီတ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်သဘာဝကျပါသည်။
ဒါပေမဲ့အဲဒါမလုပ်ခဲ့ဘူး။ The အယ်လ်ဘမ်တစ်ခု၏စျေးနှုန်း မယုံနိုင်လောက်အောင်တေးဂီတနှင့် ၀ က်ဘ်မှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေရသည့်လွယ်ကူသည့်ကြားမှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါ။ ဂီတလုပ်ငန်းကစီဒီတွေကိုသူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အဆတစ်ရာလောက်ရောင်းနေချိန်မှာဘယ်သူမှမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်တွေ၊ အဆိုတော်တွေနဲ့ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်တွေကသူတို့ရဲ့ Bentleys အသစ်ကိုပြသခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာနာမိဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အကယ်၍ ရိုးသားသူများသည်၎င်းကိုဝယ်ယူမည့်အစားတေးဂီတကိုဝေမျှသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ဖမ်းမိခြင်း၏အန္တရာယ်သည်ဂီတ၏စျေးနှုန်းထက်သာလွန်သည်။ ပြနာကရိုးသားတဲ့လူတွေ၊ တေးဂီတတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်မျှဝေတာတွေမဟုတ်ဘူး။ ဒါကတေးဂီတလုပ်ငန်းဟာအရင်ကမဟုတ်ဘူး။
ငါ့ living ည့်ခန်းထဲမှာငါမှာ HDTV နဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်အသံစနစ်ရှိပြီးအိမ်ကိုလှုပ်ခါနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ living ည့်ခန်း၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁၂ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်နှင့်ဒေါ်လာ ၁၀ ပေါက်ပေါက်နှင့်သောက်စရာတစ်စုံအတွက်ဘာကြောင့်ပိုက်ဆံပေးရမလဲ။ ငါ IMAX နှင့်မကိုက်နိုင်ဘူး ... ငါ အပိုဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိ ကြောင်းအတွေ့အကြုံသည်။ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသည်ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတို့အကြားတိုက်ပွဲမဟုတ်၊ အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ထိုအခါပြဇာတ်ရုံအနိုင်ရ!
အကယ်၍ ရုပ်ရှင်ရုံသည်အောင်မြင်လိုလျှင်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်နှင့်အစားအစာဈေးနှုန်းလျှော့ချပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းများထပ်မံဖြည့်တင်းရမည် (ညစာ၊ စပျစ်ဝိုင်နှင့်ကူပါကစီနိုအချို့) နှင့်ညအိပ်ယာဝင်ဆောင်ရန်ထိုင်ဝမ်ထိုင်ခုံအချို့ကိုထားလိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက် ဒါကိုကျွန်တော် download လုပ်လို့မရပါဘူး အတှေ့အကွုံ!
ငါသတင်းစာတွေကလစာနံရံတွေချဖို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာဖတ်ဖူးတယ် နောက်တဖန်။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်သည်သတင်းအချက်အလက်လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းစာများသည်ချိုင့်ခွက်များဖြစ်သည်။ သတင်းစာများသည်ကြော်ငြာများကိုမရောင်းနိုင်သည့်တွင်းများကိုဖြည့်ရန်အကြောင်းအရာများကို သုံး၍ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရှာဖွေရန်နက်နက်နဲနဲတူးဖော်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ကြသည်။ ငါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသတင်းစာများအတွက်ပေးဆောင်ကြဘူး ပိုကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းမှာရှာပါ, အရင်းအမြစ်ကနေ, တစ် ဦး slant မပါဘဲနှင့်၎င်း၏လှည့်ပတ်ထုပ်ကြော်ငြာခြင်းမရှိဘဲတိုက်ရိုက်။
အိုးသေချာပေါက်ငါမှာသွားလာရင်းပေး၏ The Daily သတင်းစာ.. သတင်းစာလုပ်ငန်းမှသတင်းစာဖြန့်ဝေမှုအား iPad သို့သယ်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှု။ နှေးတယ်၊ ပျက်သွားတယ်၊ သတင်းတော့မရှိဘူး။ သူတို့ကဒါခေါ်သင့်ပါတယ် မနေ့က! ဒါပေမယ့်သတင်းတစ်ခုကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်းရှင်ဝါဒရဲ့အပြင်ဘက်မှာရထိုက်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်အချို့ရှိတာကြောင့်အမြတ်အစွန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုအမြတ်အစွန်းရအောင်ဆက်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ် ပန်းချီဆရာ…သတင်းကောင်းကိုပြန်သွားပါ။ လူတွေကအကြောင်းအရာအတွက်ပေးဆပ်လိမ့်မယ်။
ဤအမှုတစ်ခုစီတွင်ကျွန်ုပ်သည်စားသုံးသူကိုအပြစ်မတင်ပါ၊ ဥပဒေချိုးဖောက်သူများအားစာနာသည်။ တကယ်တော့ဒါကအရင်းရှင်စနစ်ပဲမဟုတ်လား။ ကုန်ကျစရိတ်သည်ဆန္ဒထက်ကျော်လွန်ပါကကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုရရန်အတွက်မှောင်ခိုဈေးကွက်တစ်ခုကျန်ရှိနေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထိုစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်ကြီးထွားလာသောကြောင့်၎င်းတို့ရရှိသည် သူတို့ရဲ့နောက်ကျောအိတ်ကပ်ထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေ သွေးယိုစီးမှုကိုရပ်တန့်ရန်အပတ်တိုင်းဥပဒေများကိုထုတ်ဖော်ရန်။ ရှေးရှေး ... ဒီကိစ္စဟာရာဇ ၀ တ်မှုပြisn'tနာမဟုတ်၊ ဈေးကွက်ပြissueနာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာငါဟာပင်လယ်ဓားပြတွေအကြောင်းပဲထင်နေလိမ့်မယ်။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး! ပြုပြင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုဥပမာများစွာတွေ့ရသည်။ ပြီးတော့လူတွေဟာအရင်ကထက်အရင်ကထက်ပိုပြီးပေးဆပ်နေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ငါကလေးဘဝတုန်းကမိဘတွေမှာတယ်လီဖုန်း၊ သတင်းစာ၊ အဖြူနှင့်အဖြူရောင်တီဗီရှိပြီးဗီနိုင်းအယ်လ်ဘမ်အတွက်ငွေပေးရတယ်။ လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါပေးသည် စမတ်ဖုန်းများ၊ အသံစာပို့ခြင်း၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဒေတာအစီအစဉ်တစ်ခု၊ စာတိုပေးပို့ရေးအစီအစဉ်၊ (ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအစီအစဉ်များ) ကေဘယ်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဝယ်လိုအားကောင်းသောရုပ်ရှင်၊ ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်၊ XBox Live, iTunes နှင့် Netflix.
ဤရွေ့ကားရာဇဝတ်မှုတစ်သက်တာမှယူကြပြီအနည်းငယ်မကောင်းတဲ့ပန်းသီးမဟုတ်ပါဘူး။ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကသင်သိတဲ့သာမာန်လူတစ်ယောက်ကသီချင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကိုခိုးကူးသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေနေသည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုသည်အဓိကကျသည့်အခါပြtheနာသည်ရာဇ ၀ တ်မှုမဟုတ်ပါ။ စျေးကွက်နှင့်မည်သို့အားနည်းချက်ရှိကြောင်းတုန့်ပြန်မှုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်သင်စတင်စဉ်းစားရပါမည်။
ကွန်ယက်ဖန်တီးသောယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသော့ခတ်ခြင်း လူတွေဖြန့်ဝေပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်တာကအဖြေမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ Napster နှင့် Pirate ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်အတူဤမှတဆင့်ခဲ့ပါတယ်။ Megauploads ချခြင်းဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားဆိုက်များသည်လှုပ်ရှားမှုများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အသစ်များမှာအမည်ဝှက်သည့်တံခါးပေါက်များနှင့်စာဝှက်ထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များပါ ၀ င်သည့် virtual private ကွန်ယက်များဖြစ်သည်။ ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်ခိုးကူးမှုနှင့်ခိုးယူမှုစျေးကွက်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မျှမသွားပါ။
ဒီကော်ပိုရေးရှင်းတွေကိုငါငြီးငွေ့နေတယ် ပိုက်ဆံပျောက်သွားတယ် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ [ထည့်သွင်း] illions ၌တည်ရှိ၏။ ဒါကရဲရင့်တဲ့မုသားပဲ။ ရုပ်ရှင်ကိုခိုးယူမည့်သူများသည်ပြဇာတ်ရုံ၌ပိုက်ဆံဖြုန်းရန်စီစဉ်ခြင်းမရှိကြပါ။ မင်းပိုက်ဆံမကုန်တော့ဘူးသူတို့ခိုးတာ၊ မင်းပိုက်ဆံအရမ်းများနေလို့အိမ်ပြဇာတ်ရုံကမင်းကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရိုက်နေလို့မင်းခိုးတာပဲ။
လူတွေဟာအကြောင်းအရာအတွက်ငွေမပေးနိုင်ဘူး၊ ငါတို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့လူတိုင်းကိုပိတ်ထားဖို့ပဲ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းအရာနေ့စဉ်များအတွက်ပေးဆောင်! စျေးနှုန်းရိုးရှင်းစွာတန်ဖိုးကိုက်ညီဖို့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရှေးရှေးမှာ Angie ၏စာရင်း ဤသည်ကိုသက်သေပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည် ... ပေးချေသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်ပြီးသူတို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအားဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကယ်တင်နိုင်သည်။ Angie's List သည်ဖောက်သည်များနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီးလူကြိုက်များသောကြောင့်လူသိများသည်။
စျေးကွက်များအပြောင်းအလဲနှင့်ဤအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေအောင်မဟုတ် သူတို့ဟာဘာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုရာဇ ၀ တ်မှုပြissueနာမဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးပြnotနာမဟုတ်တာလဲ။ ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုများပြားသောရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်ရန်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်အတူတက်ကြွစွာနေပါ Electronic Frontier ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Deeplinks ဘလော့ဂ်.
Tags: ၁၉၈၁ ခုနှစ်kim dotcomအကြီးစားပန်းချီဆရာခိုးကူးပင်လယ်ဓါးပြပင်လယ်ဓားပြပင်လယ်အော်privacy ကိုလင်းနို့ခိုးမှု
မတ်လ 5, 2012 မှာ 4: 16 AM
ငါလုံးဝသဘောတူသည် - အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းများကသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါကမှောင်ခိုဈေးကွက်များဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အလွန်ကြီးစွာသောဖတ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 5, 2012 မှာ 9: 23 AM
မတ်လ 5, 2012 မှာ 9: 03 AM
ဤပြissueနာသည်မကြာမီပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်မကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းများကိုတွန်းအားပေးနေသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည်နိုင်ငံရေးဟောပြောချက်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် SOPA, ACTA နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောအားထုတ်မှုများသို့ ဦး တည်နေသည်။ Doc Searls သည်မကြာသေးမီကဆွေးနွေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုကိုဖတ်ရှုသင့်သည်။ http://blogs.law.harvard.edu/doc/2012/02/29/edging-toward-the-fully-licensed-world/
မတ်လ 6, 2012 မှာ 5: 24 pm တွင်
ဒီကော်ပိုရေးရှင်းတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေဟာ [ထည့်သွင်းခြင်း] ရောင်ခြည်များဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကော်ပိုရေးရှင်းများကိုကျွန်တော်ငြီးငွေ့ပါသည်။ ဒါကရဲရင့်တဲ့မုသားပဲ။ ရုပ်ရှင်ကိုခိုးယူမည့်သူများသည်ပြဇာတ်ရုံ၌ပိုက်ဆံဖြုန်းရန်စီစဉ်ခြင်းမရှိကြပါ။ မင်းပိုက်ဆံတွေများလွန်းတာကြောင့်မင်းအိမ်ကပြဇာတ်ရုံကခုန်နေလို့မင်းတို့ပိုက်ဆံမပျောက်ခဲ့ဘူး။
ဒီဖော်ပြချက်ကိုငါဘယ်လောက်အထိသဘောတူတယ်ဆိုတာတောင်တောင်မှငါမဖော်ပြနိုင်သေးဘူး။ ဒါဟာ 100% မှန်သည်။